Eo amin'ny planeta misy antsika dia misy farihy lehibe sy kely an'arivony. Maro amin'izy ireo no tsy manana anarana, ary ny sasany dia malaza amin'ny toetra tsy mahazatra. Iza no tsy nandre momba ny farihy lalina sy madio indrindra eto an-tany? Mazava ho azy, ity dia Baikal, any Altai. Na nafenina tao amin'ny misterin'ny renirano Loch Ness tany Ecosse, izay voalaza fa hita maso.
Antsoina hoe farihy misy loko tsy mahazatra - Lake Kelimutu, Lake Medusa, Chernilnoe, Asphalt, Lake of Glory sy Rose Lake any Aostralia . Izy ireo dia mifandraika amin'ny tsy fahampian-tsakafo voajanahary ary mifantoka amin'ny siansa mpahay siansa - Limnologists, hydrologists.
Legends of Lake Death
Tsy dia maro ny olona mahafantatra ny fisian'ny farihy maty ao amin'ny nosy Sicily - Lake of Death. Rehefa maheno anarana mitovy ny olona iray, dia tsy mahatonga ny fikambanana mahafinaritra indrindra, ary tsy very maina izany. Raha ny marina, io farihy io dia mihodina amin'ny akanjom-boninahitra ratsy ary miafina ao anaty lalina ny tsiambaratelon'ny heloka bevava tsy fantatra
Araka ny fantatrao, Sicily dia "fofom-bady" an'ny foko mafia, ary maro tamin'ireo niharam-pahavoazana nihatra tamin'ny Sicilian Mafiosi no namarana ny fijanonany teto an-tany - tany amin'ny ranon'ny farihy asidra any Sicile. Na izany na tsy izany, ity dia ny anganongano ny Farihy ny Fahafatesana, ary voatohanin'ny mponina ao an-toerana hanatsarana ny loko. Ary mba hino izany na tsia - dia tsotra fotsiny izany.
Ny marina dia mendrika ny anarany, mazava ho azy, tsy noho ny, nolazaina fa, famonoana betsaka natao tany amorony, fa noho ny firafiny. Talohan'ny nandefasana ny fitsidihana ara-tsiansa voalohany tany amin'ny farihy, tsy nisy nahalala hoe nahoana no tsy nisy aina ny toerana manodidina azy ary ny ranon'ilay farihy dia nampidi-doza ho an'ny zava-manan'aina rehetra nianjera tao.
Raha ny marina dia maty nandritra ny minitra vitsy izay rehetra miditra ao amin'ny farihy. Any amoron-tsiraka, metatra vitsy miala amin'ny rano dia tsy afaka mahita na dia kely aza ny famantarana ny zavamaniry. Nahoana no mitranga izany? Inona no karazam-borona tsy fantatra momba ny rano mahatonga azy ho faty?
Nahoana no namono ny farihy maty?
Isaorana ireo mpahay siansa maromaro izay nanandrana imbetsaka, ka mety hampidi-doza ny fiainany manokana, hanaisotra ny tsiambaratelon'ny farihy maty, dia azo fantarina fa ny antony tsy fisian'ny fiainana eto dia ny asidra solifara. Ao amin'ny ranon'ny farihy no misy izany vola be izany fa na dia ny micro micro organismes tsotra indrindra, izay tafavoaka velona amin'ny toe-javatra samihafa aza, dia avy hatrany dia maty. Azo atao ny manamboatra asidra solifara miditra amin'ny farihy avy amin'ny loharano roa ambanin'ny tany.
Ny farihy silaka any Sicile no farihy mampidi-doza indrindra eto an-tany. satria tsy rano ihany no misy poizina ato, fa ny rivotra kosa dia mihodina amin'ny asidra manimba. Na dia eo aza izany farihy asidra solifara any Sicile izany, ary manintona mpizaha tany ho azy-extremista avy amin'ny lafivalon'ny tany rehetra.
Ny endri-piainana tsy manam-paharoa toy izany dia tsy manan-tsahala eto amin'ny planeta misy antsika. Ny farihy dia mahavariana fotsiny ny hatsarany tsy mahazatra, loko mamirapiratra mamirapiratra. Amin'ny lohataona, mandritra ny volana main-dry zareo, dia mihamangatsiaka ny farihy, fa amin'ny ririnina kosa dia afaka ny ho feno. Ny firaiketam-pifaliana tsy mampino dia tsy hamela olona tsy hiraharaha. Sarotra ny mampitaha zavatra amin'ny hatsaran-tarehy sy ny loza mitatao amin'ny farihy maty.
Noho ny loza ateraky ny fifandraisana amin'ny angom-bovoka maloto dia misy hazo vita sokitra vita amin'ny hazo misy fefy ho an'ny mpizaha tany. Na dia sarotra aza ny olona rehetra, raha mahafantatra momba ny loza ateraky ny faritra manodidina, dia mety hanimba ny fitsipika ary hanakaiky ny morontsiraka tsara tarehy, fa ny poizina.
Ny farihy midadasika be dia be. Ao amin'ny faritany iray antsoina hoe Catania, any amin'ny nosy Sisila izy io ary antsoina hoe Lago Naftia di Catania.
Maro ny skeptics no manohitra fa ny ankamaroan'ny fampahalalana momba ny farihy maty dia tantara noforonina, izay tsy misy ifandraisany amin'ny tena zava-misy, fa azonao fantarina amin'ny alalan'ny fitsidihana azy irery ihany.
Visa ho an'i Boligaria ho an'ny Rosiana
Attractions in Ufa
Firenena ho an'ny maloegekh
Slovakia - toetrandro
Burgas - toetoetran'ny mpizahatany
Vietnam - toetoetran'ny mpizahatany
26 biby goavam-be miaina eto an-tany
Sakafo ho an'ny hoditra
Sciatica - fitsaboana
Herpes amin'ny molotra - fitsaboana haingana
Ahoana no fanaovana hosoka?
Ahoana no hikolokolo boaty miaraka amin'ny lamba?
Karazam-bary - recipe
Ny nendasina amin'ny fatiantoka
Fiainana tsy misy tambajotra sosialy: i Megan Markle dia tsy manaiky fifandraisana virtoaly amin'ny namana sy mpankafy
Ny vaksiny voalohany amin'ny kitten
Ahoana no fomba iforoana ny satroka ataon'ny lehilahy amin'ny fanjaitra?
Lily-Rose Depp nibilaogy amin'ny dokambarotra Chanel manjelanjelatra lipo vaovao
Salady miaraka amin'ny mango - fomba fisakafoanana
Fitaingan'ny trondro ho an'ny ankizy
Enterocolitis - fitsaboana
Pyshki amin'ny kefir
Volana maromaro momba ny volo